मोबाइल पानीमा पर्यो भने के गर्ने? यस्तो छ उपाए । – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार १५:१४
आजभोली प्राय सबैको हातहातमा मोबाइल अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। कहिलेकाही गल्तीले पनि पानीमा मोबाइल खसाल्ने गर्दछन् वा भनौ वर्षामा पनि झर्न सक्छ। त्यतिबेला सबै जना प्राय आत्तिने गर्दछन की मोबाइललाई कसरी बचाउने ? तर चिन्ता नलिनुस् पानीमा मोबाइल खसे पनि तपाई तत्काल यी उपायहरु अपनाउनुस्..
१. यदि तपाईको मोबाइल पानीमा खस्‍ने बित्तिक्कै तुरुन्त बाहिर निकाल्नुस्। जति धेरै बेर मोबाइल पानी पर्छ त्यति नै धेरै खराब हुने सम्भावना हुन्छ।
२.मोबाइलको स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई माथिबाट पुछेर मात्र ब्याट्री निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि नरम कपडाले मोबाइलको भित्री भाग पुछ्नुपर्छ।
३.मोबाइलको सिमकार्ड समेत बाहि निकाल्नु पर्छ। जबसम्म मोबाइल पूर्ण रुपमा सुक्दैन, तबसम्म न हाल्नुस्।
४. तपाईको मोबाइललाई कुनै ग्याजेट्ससँग वा फोनमा जोड्नुभएको छ भने तत्काल हटाउनुस्, यदि स्क्रिन गार्ड लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई पनि हटाउनुस्..
५. त्यसपछि मोवाइललाई चामलको बोरामा हालेर चामलले छोपिदिनुहोस् । र मोवाइलाई १२ घण्टा त्यहि अवस्थामा रहन दिनुहोस् । चामलले मोवाइलमा भएको सवै पानि आफैं सोस्छ । त्यसपछि मोववइललाई राम्रो संग पुछ्नुहोस् ।
६. जब तपाई सबै पार्ट्सलाई पुछेर सिध्याउनुहुन्छ तब मोबाइललाई केही बेर घाममा सुकाउनुहोस्। यदि त्यो भन्दा पनि अलिक धेरै पानी पसेको भए त्यो सूर्यको करणले सोस्‍न मद्दत गर्नेछ।
७. पानीबाट निकालेको मोबाइलमा २४ घण्टासम्म ब्याट्री नगाउनुहोस्। जब तपाईले मोबाइलमा सबै पानी सुकिसकेको अनुभव गर्नुहुन्छ। तब मात्रै ब्याट्री लगाउनुस् तर त्यो भन्दा अगाडी मोबाइल चार्ज भने अवश्य गर्नुहोस् । यदि यसो गरेमा तपाईको मोबाइलमा कुनै खराबी देखिदैन ।
विबाहको पहिलो रात भुलेर पनि नगर्नुस् यस्तो गल्ति, नत्र………!
२०७६ कार्तिक १८, सोमबार २०:३४
आज कुन-कुन राशि हुनेहरुको भाग्य कति प्रतिशत ? हेर्नुहोस् ।
२०७६ आश्विन १३, सोमबार ०२:४२
धेरै केरा खानुहुन्छ ? सावधान ! मुटु बन्द होला… दिनमा कतिवटासम्म खान मिल्छ ?
२०७७ चैत्र १६, सोमबार ०५:५४